Impiry moa no tokony hifindra ilay zaza?
Ho an'ny vehivavy bevohoka tena izy, matetika dia manomboka mahatsiaro tena ny vehivavy iray rehefa mahatsapa ny fiantraikany voalohany amin'ny zazakely izy.
Ny fiovan'ny foetus dia manomboka aloha kokoa noho ny mahazatra. Amin'ny fiafaran'ny herinandro fahavalo amin'ny fivoaran'ny entra-rôtinina dia manomboka ny hetsika tsy misy porofo sy tsy voaaro ny embryon. Ny hozatra manodidina ny vava, ny takolaka, manomboka mifindra aloha, angamba satria ny suking reflex no voalohany amin'ny zaza vao teraka. Mihamitombo tsikelikely ny fihetsiketsehana rehetra amin'ny hantsana rehetra ary mihamitombo ny hetsika.
Tokony ho tamin'ny roa-polo herinandro ny fivoaran'ny entrauterine dia tsy embryon intsony intsony, fa ny foetus, dia manomboka mihetsika mafy tokoa fa ny hetsika manaraka dia efa voamariky ny reny ho avy. Mihatra, efa roa herinandro izao, ary mbola tsy mihetsika ny voankazo. Misy fanazavana maromaro amin'izany:
angamba ity dia singa manokana amin'ny foetus, ary noho izany dia ara-dalàna raha manomboka 22-23 herinandro ny hetsika;
raha ny toerana misy ny renim-piankohonana dia eo amin'ny rindrina anoloana, izany angamba no mety hitranga na dia ny hetsika marefo aza dia tsy mahatsapa raha tsy mazoto kokoa;
Mitranga izany fa mihena ny fahatsapan'ny reny noho ny firafitry ny endriky ny endriny.
Raha nahatsapa ny fiheverana mialoha kokoa ianao - amin'ny 15-17 herinandro, izany koa dia lanjan'ny fitsipika. Amin'ny ankapobeny dia ekena fa ny fiatrehana indray mandeha indray dia manomboka aloha kokoa amin'ny isaky ny vohoka. Tsy tena marina izany. Satria na dia ny renim-pianakaviana manana zanaka maro aza dia manomboka aloha kokoa noho ny, ohatra, ilay zaza farany.
Saingy tonga ny vanim-potoana voalohany teo aloha, saingy tsy fantatrao ny fomba hahatakarana fa ny foetus dia mihetsika, ary tsy tokony hampifangaro ny fihetsiky ny tsinay. Ny fihanaky ny zaza ao anaty toy ny blasaka manjelanjelatra, dia toa hita fa mitifitra sy manohina ny rindrin'ny tranonjaza ao anatin'ilay trondro ny zava-drehetra, fa samy hafa izany.
Inoana fa raha mibanjina ny eo ankavanana ny mama, dia hisy zazalahy iray, ary raha havela - tovovavy iray.
Ohatrinona ary firy no tokony hifindran'ny foetus?
Amin'ny voalohany, mety ho tsy mety ny fiatrehana: ao anatin'ny iray andro, na roa mihitsy aza. Rehefa mandeha ny fotoana anefa, dia mihatsara hatrany ny asany, ary vao mainka mihetsiketsika ny zaza.
Ao anatin'ny fe-potoana 28 herinandro, araka ny fenitra tokony hatao dia tokony farafahakeliny folo isan'andro. Ny asan'ny ankizy dia lasa ny mari-pahaizana momba ny fahasalamany. Raha mivezivezy am-pahavitrihana ny foetus - matetika dia marika tsara izany. Ary raha tsy mitombina izany antony izany, dia tonga tampoka tampoka izy io, fotoana ahafahana mahita dokotera iray, maka fitsapana, manamboatra karôtôkôgrafia fetal, tsy hita isa. Tena manimba ny oksizenina ny fisorohana.
Raha voamarina ny fanadihadiana, ny reny hoavy dia homena fitsaboana sy fitsangatsanganana amin'ny rivotra madio.
Aorian'ny famaranana ny bevohoka dia mety hiteraka herisetra mahery vaika ny hoe ny vehivavy bevohoka, toy ny teo aloha, dia miorina eo an-damosiny. Amin'io toerana io dia voatsindry ny volo ambany ambany, mihena tampoka ny rà mandriaka ao amin'ny foetus, ary manomboka manao hetsi-panoherana izany.
Mandra-pahoviana no tsy hihetsiketsika ny voankazo?
Misy ireo toe-javatra izay, raha ny marina, ny foetus dia mihetsiketsika na mihataka tanteraka. Eritrereto, angamba ianao nandany ny tongotra manontolo andro, ary noho izany, niaraka tamin'ny hetsika tsy tapaka, dia tsy naheno ny fihoaram-pefy fotsiny ianao.
Misy fomba maro ahafahana mampihetsika ny foetus. Mialà eo amin'ny andaniny ary henoy. Ao anatin'ny 15 minitra dia hahatsapa ny voankazo izy. Afaka misotro divay mamy ianao na mihinana zavatra mamy. Hivoatra ny haavon'ny glucose, ary hihetsika avy hatrany ilay zaza.
Ara-dalàna raha tsy mihetsika mandritra ny 3-4 ora ny foetus. Saingy raha toa ka tsy mitondra na inona na inona ny zava-drehetra ataonao, ary ao anatin'ny 12 ora dia tsy mandre resaka ianao, fa fotoana iray ahafahana mitady fanampiana avy hatrany.
Amin'ny fiafaran'ny fitondrana vohoka dia lasa tsy dia mavitrika loatra ny korontana. Nihalehibe ilay zazakely ary nanakaiky ny reniny tamin'ny vavony. Alohan'ny hampodiana dia mampihorohoro izy, manomana ny asa ho avy - ny fahaterahany.
Ny fanambadiana sy ny lahy
Ny kibo dia bevohoka 17 herinandro
Ny fototry ny tadim-poitra
Fetalin'ny fetal vao maraina
Ny faharetan'ny fitondrana vohoka dia ny fomba fanisana ara-dalàna. Ny fiterahana sy ny tena vanim-potoanan'ny bevohoka.
Fiompiana dobo ho an'ny vehivavy bevohoka - tsara sy ratsy
Ahoana no ahazoan'ny kambana sy kambana?
Na azo atao izany Analginum amin'ny bevohoka?
Fampisehoana ny tendrontany, 20 herinandro
Herinandro 22 herinandro - fihetsiketsehana fetal
Kylie Minogue sy Kylie Jenner dia tsy afaka mizara izany anarana izany
Inona no atao hoe Davida?
Ny akanjon'ny reny ho an'ny fahavaratra
Fanomanana vy amin'ny tsy fahasalamana
Tena ilaina ny sòs salady?
Restôranta any Ulan-Ude
Ahoana ny momba ny mombamomba azy ao amin'ny tambajotra sosialy mba hahafantarana lehilahy iray izay tsy hahavita ny fiainanao
Inona no hanomezana namana iray 14 taona?
14 amin'ireo toerana mahatsiravina indrindra any Etazonia
Ny endriky ny alika Jack Russell Terrier
Marina Vladi ary Vladimir Vysotsky